Shaati clothing Dharka xayaysiiska ah • farshaxanka P&M ee kumbuyuutarka lagu farsameeyo
Shaati waa dhar qurxoon oo casri ah oo aan waqti lahayn oo had iyo jeer ku jiri doona moodo. Tayo wanaagsan, oo kaamil ah faahfaahinta, oo si fiican loogu qaabeeyey midabada dhexdhexaadka ah ayaa had iyo jeer noqon doonta bandhig sharaf leh.
Shaatiyada xayaysiinta - dabeecad u gaar ah oo xarrago leh
Naqshadeynta caadiga ah ee shaatiyaduhu waxay u oggolaaneysaa adeegsiga goobaha shaqada ee kala duwan. Si kastaba ha noqotee, haddii aan dooneyno inaan siino dabeecad shaqsiyeed, waxaan kugula talineynaa inaad ku calaamadeysid habka daabacaadda kumbuyuutarkaoo shaqadoodu sida ugu fiican ugu habboon tahay miisaanka sare ee shaararka. Waxaan bixinaa funaanado xayeysiis ah, kuwaas oo ah aasaas aad u wanaagsan oo lagu calaamadeeyo.
Waxaan bixinaa funaanado xayeysiintakaas oo lagu daabaco wixii daabacan. Waa daaweyn dhab ah shirkadaha qiimeeya isku dhafka qaab wax ku ool ah iyo waxqabad heer sare ah. Waxaan daryeelaynaa faahfaahinta ugu yar, sidaa darteed waxaan hubnaa inaan la kulmi doonno waxyaabaha laga filayo xitaa kuwa ugu baahida badan.
At pm.com.pl waxaad dalban kartaa ma aha oo kaliya shaati xarrago leh, laakiin sidoo kale shaashad kumbuyuutar kasta oo lagu dhejiyo alaabada
Dalabkeena waxaa ka mid ah funaanado xayaysiis oo loogu talagalay haweenka iyo ragga. Moodooyinka leh gacmo dhaadheer waa qaabab caalami ah oo la gashan karo sanadka oo dhan. Shaati gacmo gaab ah ayaa lagula talinayaa bilaha xagaaga. Dharka aan bixinno waxay la jaanqaadayaan shaxanka waana ku habboon yihiin in la xidho iyada oo ay ugu wacan tahay isticmaalka dharka suufka ah.
Shaarka haweenka ee 'Adler Style', midabyo kala duwan oo la heli karo oo leh suurtagalnimada shaashad kasta
Daabac adkaysi u xoqid
Shaatiyada xayeysiinta waa soo-jeedin ku habboon shirkadaha, hay'adaha ama hay'adaha waxbarashada ee doonaya inay ka soo baxaan tartanka oo ay naftooda siiyaan kaar xayeysiis caqli iyo xarago leh.
Waxyaabaha xayeysiinta ah, iyadoon loo eegin inay ku suntan yihiin kalabar ama dharka sida shukumaanadawaxaa lagu sameeyaa iyadoo la fiirinayo faahfaahinta ugu yar.
Waxaan leenahay baarkinka mashiinka noo gaar ah oo ku qalabeysan qalab casri ah awood noo siineysa inaan sameyno sixitaan joogto ah oo u adkeysata dhaawaca. Intaa waxaa dheer, isticmaalka dunta tayada sare leh waxay haysaa foomka iyo midabada qurxinta muddo dheer, xitaa ka dib maydh badan. Dawaarka qaabkan loo sameeyay waa bandhig aan fiicnayn, isticmaalka joogtada ah ee shaatiguna khatar ma keenayso.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad soo booqato dukaan. Kooxdayada khibrada leh way ku farxi doonaan inay kaa caawiyaan xulashada dharka waxayna ku siin doonaan qiimeyn lacag la'aan ah.